ရင်ဖွင့်စကားသံ | MTS Online Radio
MTS Online Radio
ကြိုဆိုပါ၏ … MTS Online Radio သို့လာရောက်လည်ပတ်ကြသောမိတ်ဆွေများကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။
Homeတရားတော်များပွေးလှဆရာတော်-ဦးသုမနာစာရချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဒယ်အိုးဆရာတော်မဟာစည်ဆရာတော်သီတဂူဆရာတော်ယောဆရာတော်အောင်သုခ-ဆရာတော်ကြာနီကန်ဆရာတော်ဖြူးဆရာတော်နည်းပညာများAuto CAD လေ့လာရန် E-Bookကွန်ပျူတာသမားတွေ အတွက်လိုအပ်မဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်စရာ စာအုပ်လေးပါ၊မိမိပို့ လိုက်တဲ့ Email ကိုလက်ခံတဲ့သူကဖတ်မဖတ်ဟက်ကာတွေကို အလွယ်ကူဆုံးခြေရာခံနည်းBabylon V-8.0.5.5. နှင့် မြန်မာအဘိဓာန်များFolder ကို Lock ချနည်း။HTML & CSS: The Complete Reference, Fifth EditionPrivate DataများကိုControl Panel အယောင်ဆောင်၍လုံခြုံစွာသိမ်းနည်းကွန်ပျူတာSystem Speed ကိုမြန်ဆန်စေရန်Windows7(OR) Windows Xp ရဲ့ keyboard ကို Disable လုပ်ကြည့် ကြမယ်။ပရိတ်တော်များရင်ဖွင့်စကားသံရယ်ရွှင်စရာများရေကူးကန် နှင့် ဆိုင်းဘုတ်ရာဇ၀င်များအင်္ဂလိပ်သီချင်းများအထူးသတိပေးအထွေထွေဖတ်စရာများ8 best moment in lifeတချိန်က ခရေပန်းလေးမှတ်သားစွယ်စုံမြန်မာစကားပုံများ(၁)ရင်ထဲကမေမေသတိမမူ ဂူမမြင် ။သတိရတယ်အမေသားတို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင် အမေအင်တာနက် နှင့် အချစ်ဒုက္ခအင်တာနက်လားးးကျူတာလားးးးအတွေးအပိုင်းအစများးးမေတ္တာ ဟူသည်…မွေးမေမေ ကျေးဇုး (အမေများနေ့အမှတ်တရ)ရှေးမြန်မာစိတ်ဓာတ်မွေးမြူပါ…မြန်မာ အမျိုးသမီးများ သတိထားစေချင်။မြန်မာစကားပုံ ဗဟုသုတတိုးပွားစေရန်နှစ်ဘက်မြင်ဝါဒကျင့်သုံးပါ။True Love and True Careဆေးပညာများကင်ဆာရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာလေးဖက်နာ နှင့် ဆေးကောင်းတလက်နောက်ဆုံးပေါ်ကားများAll Audi CarsALL BMW CARSFerrari Carsမြန်မာဝတ္တူများFree Pc GamesDeath Rally RacingDriving Speed 2(Racing)FBI Hostage Rescue GameVovol GameSoftwares များင်္Files Recovery SoftwareBabylon 8 အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်Microsoft Security EssentialsPhotos DVD Maker Softwareမြန်မာသီချင်းများမျိုးကြီးမေဆွိ
ကျနော် အခုလို့ wordpress.com နဲ့ web site လေးလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျနော်လေးစားချစ်ခင်ရသော အဝေးရောက်မိဘ ၂ပါးနှင့် သူငယ်ချင်းများ။ တရားချစ်ခင် Buddha ဘာသာဝင်များအလွယ်တကူတရားနာယူလို့ရရှိရေးအတွက် နှင့် သီချင်းကြိုက်သူများနားဆင်၇န်အတွက် အထူးပြုလုပ်ပေးထားတာပါ။
မည်သည့် Web sites ၊ မည်သူ့ကိုမှ ပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ်လုံးဝမရှိကြောင်း ပြောကြားလို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပညာရှင်များကလည်း မှားနေတာများ သို့မဟုတ် ယခုကျနော် တတ်သလောက်မှတ်သလောက်ဖန်တီးထားမှုထက် ပိုမိုတိုးတက်စေရန် စေတနာနှင့်ကူညီပေးလိုသူများ ရှိပါကလည်း ကျနော်ဖိုးလမင်းမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိစွာဖြင့် နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
လာရောက်လည်ပတ် ဖတ်ရှု။ တရားနားဆင်သူများ၊ သီချင်းနားဆင်သူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်လျှက်……
ကျနော်ကူညီနိုင်သည်များရှိပါက ကျနော့်ထံသို့ အီးမေးနှင့်သော်လည်းကောင်း ။ ကွန့်မန့်ပေးခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောတရားတော်များနှင့် သီချင်းများကိုလည်း နားဆင်ရာတွက်အခက်ခဲများရှိပါက ကျနော့်ထံသို့ အချိန်မရွေးလူမျိုးဘာသာ မရွေး
မေတ္တာရှင် အွန်လိုင်းရေဒီယို	http://173.255.137.7/MTS/ရေဒီယိုနားဆင်ရန် အထက်ပါ Link အားနှိပ်ပြီး မိမိကွန်ပြူတာတွင် Window Media Player ဖြင့် ၂၄ နာရီ နားဆင်နိုင်ပါသည်။
နားဆင်ရန် mts4u@myittarshin.comကို Gtalk မှ
Auto CAD လေ့လာရန် E-Book
ကွန်ပျူတာသမားတွေ အတွက်လိုအပ်မဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်စရာ စာအုပ်လေးပါ၊
မိမိပို့ လိုက်တဲ့ Email ကိုလက်ခံတဲ့သူကဖတ်မဖတ်
Babylon V-8.0.5.5. နှင့် မြန်မာအဘိဓာန်များ
Folder ကို Lock ချနည်း။
Private DataများကိုControl Panel အယောင်ဆောင်၍လုံခြုံစွာသိမ်းနည်း
ကွန်ပျူတာSystem Speed ကိုမြန်ဆန်စေရန်
Windows7(OR) Windows Xp ရဲ့ keyboard ကို Disable လုပ်ကြည့် ကြမယ်။
ရေကူးကန် နှင့် ဆိုင်းဘုတ်
8 best moment in life
သတိမမူ ဂူမမြင် ။
သားတို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင် အမေ
အင်တာနက် နှင့် အချစ်ဒုက္ခ
မွေးမေမေ ကျေးဇုး (အမေများနေ့အမှတ်တရ)
မြန်မာ အမျိုးသမီးများ သတိထားစေချင်။
True Love and True Care
လေးဖက်နာ နှင့် ဆေးကောင်းတလက်
Death Rally Racing
Driving Speed 2(Racing)
FBI Hostage Rescue Game
င်္Files Recovery Software
Babylon 8 အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်
Photos DVD Maker Software
On the floor-Jennifer lopez ft pitbull
ရင်ဖွင့်သံ နှင့်တောင်းပန်လွှာ	*ရင်ဖွင့်သံ*
မိဘ ၂ပါးနှင့် သူငယ်ချင်းများ ၊ တရားချစ်ခင် Buddha ဘာသာဝင်များအလွယ်တကူတရားနာယူလို့ရရှိရေး
မည်သည့်ဘလော့၊မည်သည့်Website ကိုမျှ တိုက်ခိုက်ပြိုင်ဆိုင်လိုခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်း
ကောင်းနိုးရာရာ ဗဟုသုတရရှိစေမည့်နည်းပညာများနှင့် တရားတော်များကို မိမိကိုယ်တိုင်ရေးသားဖန်တီး၇်ျသော်
လည်းကောင်း (သို့ ) အခြားဘလော့မှ ဗဟုသုတရနိုင်